Articles tagged 'zec'
Zec defers local authority polls 26 January 2019 HARARE - The Zimbabwe Electoral Commission (Zec) has deferred the local authority by-elections that were scheduled to be held this month in Chitungwiza and Bulawayo. In a statement, Zec said the by-elections in Chitungwiza's ward 24 and Bulawayo's ward 28 has been postponed as it is no longer ...
Biti trial: Zec admits poll results altered 24 January 2019 HARARE - Zimbabwe Electoral Commission (Zec) acting chief elections officer Utoile Silaigwana yesterday revealed that polling station results in the July 30 elections were altered to benefit some candidates. Silaigwana made the revelations during cross-examination when he was testifying during...
Reprieve for Nduna 28 September 2018 HARARE - Parliament has given newly-elected Chegutu West Member of Parliament Dexter Nduna the green light to continue his duties as legislator notwithstanding a court challenge to his electoral victory. This was after opposition MDC legislators had sought to have him barred from making contri...
Electoral Court to deliver verdict on Nduna victory 24 September 2018 HARARE - The Electoral Court is set to hand down its verdict today in the case in which MDC Alliance candidate Gift Konjana is challenging newly-sworn-in Zanu PF legislator Dexter Nduna's victory in the Chegutu West National Assembly elections. This comes after magistrate Mary Zimba-Dube — who...
Electoral Court defers ruling on Nduna's Chegutu West win 19 September 2018 HARARE - The verdict in the Electoral Court challenge to newly-sworn-in legislator Dexter Nduna (Zanu PF) accused by MDC Alliance rival Gift Konjana of stealing the Chegutu West National Assembly seat was postponed to Monday. The Zimbabwe Electoral Commission (Zec) had initially announced Ndun...